B52 mifandray olana
fanontaniana B52 mifandray olana
10 volana 4 herinandro lasa izay #1212 by coull
Salama daholo.Marcus eto.Just manontany tena raha misy manana olana amin'ny fonosana Boeing B-52H FSX & P3D.Ilay mampiseho eto dia mifanentana prepar3d v4 nefa tao amin'ny ahy rehefa avy nametraka azy dia tsy nampiseho sary tao amin'ny rakitra voafidy ary nianjera rehefa nanandrana nampiditra azy aho.Hope hihaino avy amin'ny sasany tsy ho ela.
10 volana 3 herinandro lasa izay #1215 by rikoooo
Nahaliana izay nolazainao dia nopikiko ity fileo ity ary azoko antoka fa tsy mifanaraka izany Prepar3D v4, na izany aza, ny mpanoratra ny fanavaozana (David Robles) dia mody milaza fa havaozina izany FSX TIANA misy rindrambaiko MCX fa FAHAFANTESANA AZY. Ireo modely ireo dia mbola avy amin'ny FS2004. Noho izany, izao aho afaka milaza fa mifanaraka amin'ny FSX ary P3D hatramin'ny VERSION 3 (tsy 4). Nohavaoziko ny pejy mba hita taratra ny marina.
Misaotra anao nitondra izany olana izany tamiko.
10 volana 3 herinandro lasa izay #1216 by coull
Miangavy Erik.Yeah.Kana mafy ianao indraindray mandra-piteninao amin'ny olona iray izay tsy mahavita azy. Havelako hahafantatra anao aho rehefa mahita olon-kafa.